မြန်မာ့အမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူးနှင့် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့အမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူးနှင့် အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ??
ရှေ့ဘီးချမရသော်လည်း လေယာဉ် အောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သည့် လေယာဉ်မှူးနှင့်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေ ၁၂ ရက်က မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ ရန်ကုန်-မန္တလေး-ရန်ကုန်ခရီးစဉ်အဖြစ် လေယာဉ်မှူး ဦးမြတ်မိုးအောင်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့မောင်းနှင်လာသော လေယာဉ်သည် မန္တလေးလေဆိပ်သို့ဆင်းသက်စဉ် ရှေ့ဘီးချမရခဲ့ပေ။ ယင်းကဲ့သို့ ရှေ့ဘီးချမရဘဲ ဆင်းသက်ခဲ့ရသော်လည်း လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသူ ခရီးသည် ၈၂ ဦးအပါ အဝင် လိုက်ပါလာသူအားလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိခဲ့သည့်အပြင် လေယာဉ်ပျက်စီးထိခိုက်မှု နည်း စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစွမ်းဆောင်မှုကြောင့် လေယာဉ်မှူးဦးမြတ်မိုးအောင်နှင့်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ် စား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးတို့က နေပြည်တော်ရှိ၊ Horizon Lake View တွင် မတ် ၁၆ ရက်က အခမ်းအနားဖြင့် ဂုဏ် ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စအပေါ် အလေးအ နက်ထားပြီး သေသေချာချာမေး မြန်းပြီးမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကပ္ပတိန်၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့ဝင် များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားလုံးကောင်း မွန်သောကြောင့် သာ ခရီးသည်များဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင် ပျံသန်းဆင်း သက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံ ကြည်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏တိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားခဲ့သည် ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ က ပြောသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်ကလည်း လေယာဉ်မှူး၏ တည်တည်ငြိမ် ငြိမ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ”သူ့ရဲ့ Procedure အားလုံး လုပ်စရာရှိတာတွေကို အားလုံး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဆုံးဖြတ် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်” ဟု ၎င်းကပြော သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေး အပ်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြည်ထောင် စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်း သူက ကိုယ်စားပေးအပ်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် လေယာဉ် ပေါ်လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည် များကိုယ်စား မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစိုးမိုးကျော်က ဂုဏ်ပြုစကားပြော ကြားခဲ့သည်။ ယင်းခရီးစဉ်တွင် လေယာဉ် မှူး မြတ်မိုးအောင်ဦးဆောင်ကာ FO ကောင်းဆက်လင်း၊ FO မျိုး သီဟအောင်၊ cabin crew များ အဖြစ် မချယ်ရီမြင့်၊ မကေဂျာဆန် အောင်၊ မခိုင်ဇာလင်းနှင့် မဥမ္မာ အောင်တို့ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သီရိလင်္ကာတွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွား၊ ၇၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး
လေယာဉ်ဆီများ တင်ဆောင်လာသည့် ၂၂ ဘီးတွဲယာဉ် ကားဘီးများ ရေနံချောင်းတွင် မီးလောင်
ယခုရာသီကုန်တွင် အနားယူဖွယ်ရှိကြောင်း ရော်ဘင် ဖွင့်ဟ
အာရှ၏ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဟု ဆွန်ဟောင်မင်အား နည်းပြပိုချက်တီနို